थुनछेक बहस सकिने सम्भावना न्यून, रवि फेरी हिरासत फर्किनुपर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
चितवन । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गरिएका रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरिएपनि आज थुनछेक बहस नसकिंदा फेरी हिरासतमैं फर्किनु पर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पुडासैनीको मृत्यु अघिको भिडियो र अन्य प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरेको आधारमा तयार भएको अभियोग पत्र सरकारी वकिल कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत भएपनि बहस भने हुन सकेको छैन ।
आज बहस शुरु भएपनि आधा दर्जन बढी अधिवक्ताहरु बहस गर्ने भएकोले आजै थुनछेक बहस अन्त्य नहुने देखिएको हो ।
प्रहरीले दुईपटक गरी अनुसन्धानका लाग १० दिनको म्याद पाएको थियो । दश दिनभित्र आवश्यक अनुसन्धान गरेपछि रविलाई थुनछेक बहसका लागि अदालत पु याइएको हो । रविका समर्थकहरुले उनलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेपनि प्रहरीले भने मुद्दा नै दर्ता गरि कार्वाही अघि बढाइएको हो ।
चितवन प्रहरीले भिडियो, मौखिक बयान र आरोपित तथा मृतकबीचका अडियो र मोबाइललगायतका सञ्चारको अध्ययन गरेपछि लामिछानेमाथि अपराध संहिताको दफा १८५ बमोजिम ‘आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको” आरोपमा अभियोग पत्र तयार भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस सामाजिक सञ्जालले बहकाएको नेपाली समाज– चैतन्य मिश्र
प्रतिवादीका तर्फबाट सुसिल पन्त, सुनिल पोखरेल र चुडामणी सापकोटाले बहस गर्नेछन भने आरोपी अस्मिता कार्किको तर्फबाट पनि छुट्टै ३ जना अधिवक्ताले बहस गर्ने बुझिएको छ ।
माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार पुडासैनि भरतपुरको नारायणगढस्थित पोखरा बसपार्कको कोठाभित्र गएको साउन २० गत्ते राति झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । उनले मृत्यु अघि रेकर्ड गराएको भनिएको भिडियोमा रवि, युवराज र अस्मितालाई आरोप लगाएपछि उनिहरु तिनै जना साउन ३० गत्ते काठमाण्डौबाट पक्राउ परेका हुन ।
रविमाथि अभियोग नै लागेको अवस्थामा उनी निशर्त रिहाई हुने सम्भावना सकिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमाथि थुनछेक बहस भएपछि रवि लामिछानेलगायतलाई धरौटीमा छोड्ने या पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विषयमा न्यायाधिशले फैसला सुनाउने छन् ।
अधिकांश यस्ता प्रकृतिका घटनामा धरौटीमा रिहाई हुने देखिएबमोजिम रवि लामिछाने समेत धरौटीमा छुटने सम्भावना भने कायमै छ ।
तर आज बहस ढिलो शुरु हुँदा रवि आजै छुटने सम्भावना भने निकै कम भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस कसरी पाए पुडासैनीकाे भिडियो? पत्रकार श्रेष्ठले मुख खाेले
मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा अभियुक्तलाई साधरण तारेख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुने गर्दछ।
यस्तो बहस एक दिनमा नसकिने अवस्था पनि रहन्छ। मुद्दा दायर भएपछि पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनेपछि मात्रै न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश दिने गर्दछन्। यसरी मुद्दा दायर भएपछि सामान्यतया दुई वर्षभित्र अभियुक्तहरु दोषि वा निर्दोष के हुन् भन्ने फैसला अदालतले गर्छ।
चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एकजना प्रहरी अधिकृतका अनुसार, आज थुनछेक बहस नभएपछि रविलगायतका आरोपितलाई पुनः हिरासतमा नै ल्याइनेछ । थुनछेक बहसको फैसला नआउँदा सम्म रवि लामिछाने प्रहरी नियन्त्रणमा नै रहनेछन् ।
थुनछेक बहसपछि धरौटीमा छुटेपनि या पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपनि रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतमा पुनः बयान दिने र मुद्दा लडन भने पाउने छन् । उनी निर्दोष छन् या छैनन भन्ने कुरा अदालती कार्वाहीको अन्तिम नतिजबाट मात्रै थाहा हुने छ ।
जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछानेका पक्षमा फैसला नभएपछि उनी पुनरावेदन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि मात्रै यो विषयको अन्तिम किनारा लाग्नेछ ।
ट्याग्स: चितवन जिल्ला अदालत, रवि लामिछाने